CryptoCircuits စျေး - အွန်လိုင်း CIRC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CryptoCircuits (CIRC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CryptoCircuits (CIRC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CryptoCircuits ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CryptoCircuits တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CryptoCircuits များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CryptoCircuitsCIRC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0227CryptoCircuitsCIRC သို့ ယူရိုEUR€0.0193CryptoCircuitsCIRC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0174CryptoCircuitsCIRC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0208CryptoCircuitsCIRC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.204CryptoCircuitsCIRC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.144CryptoCircuitsCIRC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.505CryptoCircuitsCIRC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0851CryptoCircuitsCIRC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0301CryptoCircuitsCIRC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0317CryptoCircuitsCIRC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.508CryptoCircuitsCIRC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.176CryptoCircuitsCIRC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.122CryptoCircuitsCIRC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.69CryptoCircuitsCIRC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.82CryptoCircuitsCIRC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0311CryptoCircuitsCIRC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0345CryptoCircuitsCIRC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.706CryptoCircuitsCIRC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.157CryptoCircuitsCIRC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.41CryptoCircuitsCIRC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩26.88CryptoCircuitsCIRC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦8.72CryptoCircuitsCIRC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.66CryptoCircuitsCIRC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.626
CryptoCircuitsCIRC သို့ BitcoinBTC0.000002 CryptoCircuitsCIRC သို့ EthereumETH0.00006 CryptoCircuitsCIRC သို့ LitecoinLTC0.000418 CryptoCircuitsCIRC သို့ DigitalCashDASH0.000256 CryptoCircuitsCIRC သို့ MoneroXMR0.000259 CryptoCircuitsCIRC သို့ NxtNXT1.79 CryptoCircuitsCIRC သို့ Ethereum ClassicETC0.00333 CryptoCircuitsCIRC သို့ DogecoinDOGE6.68 CryptoCircuitsCIRC သို့ ZCashZEC0.00028 CryptoCircuitsCIRC သို့ BitsharesBTS0.865 CryptoCircuitsCIRC သို့ DigiByteDGB0.744 CryptoCircuitsCIRC သို့ RippleXRP0.08 CryptoCircuitsCIRC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000792 CryptoCircuitsCIRC သို့ PeerCoinPPC0.0749 CryptoCircuitsCIRC သို့ CraigsCoinCRAIG10.47 CryptoCircuitsCIRC သို့ BitstakeXBS0.98 CryptoCircuitsCIRC သို့ PayCoinXPY0.401 CryptoCircuitsCIRC သို့ ProsperCoinPRC2.88 CryptoCircuitsCIRC သို့ YbCoinYBC0.00001 CryptoCircuitsCIRC သို့ DarkKushDANK7.37 CryptoCircuitsCIRC သို့ GiveCoinGIVE49.77 CryptoCircuitsCIRC သို့ KoboCoinKOBO5.24 CryptoCircuitsCIRC သို့ DarkTokenDT0.0209 CryptoCircuitsCIRC သို့ CETUS CoinCETI66.36
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 23:55:02 +0000.